Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 15 Comments
haaa.. diet လုပ်လည်း စားလို့ရပါတယ်။ တခါတလေပဲဟာ… 🙂
ွှဟုတ်လား။ Thanks 🙂
စားသွားပါ မရေ.. 😀
Yeah you can Ma! 🙂
Plz try it! bro 😛